भारतसँग युद्ध सम्भव छ : पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान - Aarthiknews
एजेन्सी । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेपछि इमरान खानले कयौं चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ । आर्थिक क्षेत्र असफल हुनबाट पाकिस्तान बल्लबल्ल जोगिएको छ । अझै पनि आर्थिक संकटको बादल पूरै हटेको छैन ।
अर्कोतर्फ भारतसँग हालैका दिनमा कश्मीरको विषयमा तनाव चरम स्थितीमा छ भने देशभित्रै पनि कराँचीमाथि राजनीति तातेको छ । भारतले जम्मू–कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरेको विषयमा पाकिस्तानले यो मुद्दालाई विश्वको हरेक मञ्चमा उठाएको छ तर यसमा उनीहरुले सोचेजस्तो सफलता पाएका छैनन् ।
इमरान खानलाई पाकिस्तानमा उनका विरोधीले ‘यु–टर्न’ प्रधानमन्त्री भन्ने गर्छन् । इमरान खानले नयाँ पाकिस्तान बनाउने बाचा गरेका थिए तर अझै पनि कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।
इमरान खानले अलजजिरालाई दिएको अन्तरवार्तामा भारतसँग कश्मीरमाथि युद्ध सम्भव भएको बताएका छन् । के दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न देशबीच कुनै ठूलो संघर्ष वा युद्धको खतरा छ ? यस प्रश्नको जवाफमा उनले दुई देशबीच युद्धको खतरा रहेको बताए । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतसँग युद्ध सम्भव छ ।’
पाकिस्तानको आफ्नो छिमेकी देश चीनसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपमा नजिक छ भने भारतसँग त्यसको बिल्कुल तल्लोस्तरको छ । इमरान खानले कश्मीरका विषयमा उक्त अन्तरवार्तामा भने, ‘कश्मीरका ८० लाख मुस्लिम पछिल्लो ६ सातादेखि कैद भएका छन् । भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवाद फैलाएको आरोप लगाएर संसारको ध्यान यस मुद्दामा भट्काउन चाहेको छ । पाकिस्तानले कहिल्यै युद्धको सुरुवात गर्दैन । यस विषयमा म प्रष्ट छु । म शान्तिप्रिय मान्छे हुँ । युद्ध विरोधी हुँ । युद्ध समस्याको समाधान होइन भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
‘भारत हामीलाई कंगाल बनाउन चाहन्छ’
इमरान खानले भने, ‘दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न देश युद्धमा गयो भने यसको परिणामको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्पर्क गरेका छौं । हामीले विश्वका हरेक मञ्चमा यो मुद्दा उठाइरहेका छौं । हामीले यसको राजनीतिक समाधान चाहेका छौं । यदि मुद्दा युद्धसम्म पुग्यो भने यो भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्र सीमित रहने छैन । यो धेरै अगाडि जान्छ र संसारलाई प्रभावित गर्छ ।’
इमरान खाले भने, ‘हामीले भारतसँग वार्ताको प्रयास गर्‍यौं तर भारतले हामीलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको कालोसूचीमा हाल्ने प्रयास गर्‍यो । यदी पाकिस्तान कालोसूचीमा पर्‍यो भने हामीमाथि कयौं प्रतिबन्ध लाग्नेछ । भारतले हामीलाई कंगाल घोषणा गराउन चाहन्छ ।’
उनले भने, ‘भारत सरकाले आफ्नै संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको छ । यसपछि उससँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को उक्त प्रस्ताव विरुद्ध गएर गैरकानूनी तवरले कश्मीरलाई मिलाएको छ । जहाँ जनमतसंग्रहको सुनिश्चिता दिइएको थियो । यस तवरले उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमात्र होइन संविधान पनि उल्लंघन गरेको छ ।’
त्यस्तै भारतले स्पष्ट गरिसकेको छ की जम्मु–कश्मीर उसको आन्तरिक मामिला हो र यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्दैन ।
जब इमरान खानलाई उनको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धीको विषयमा सोधियो तब उनको उत्तर थियो, ‘हामी पहिले नै एक नयाँ पाकिस्तानमा छौं...यस सरकाले यस्तो कार्य गरिरहेको छ जुन पहिलेको कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन । तर भनाइ छ, ‘रोम एक दिनमा बनेको होइन ।’ तपाई यती ठूलो परिवर्तनको र सुधारको सुरुवात गरिरहनुभएको छ भने समय त लाग्छ नै । कुनै पनि सरकारको कामकाजको समीक्षा पाँच वर्षपछि हुन्छ । पहिलो वर्ष सबैभन्दा कठिन समय थियो तर अबदेखि जनतालाई फरक महशुस हुनेछ । यतिबेला देशले सही दिशा लिएको छ ।’
‘मूर्ख मानिस यु टर्न हुँदैन’
इमरान खानले अलजजिरासँग भने, ‘जब मलाई यु–टर्नवाला प्रधानमन्त्री भन्छन्, मलाई खुशी लाग्छ । किनकी मूर्ख मानिसहरुले मात्रे यु–टर्न लिँदैनन् । बाटोमा आएका पर्खालमा शिर ठोकाइ रहन्छ । एक बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो रणनीतिको तुरुन्त सुधार गर्छ ।’
तर उनको यु–टर्नले देशमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ?
इमरान खानसँग सोधिएको थियो परमाणु हतियार सम्पन्न दुई छिमेकी देशबीच कस्तो ठूलो खतराको सम्भावना छ, उनले भनेका छन्, ‘निश्चित रुपमा भारतसँग युद्धको सम्भावना छ ।’
इमरान खानले भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरको अधिकार खारेज गरेपछि उसँग वार्ताको प्रश्नै नहुने बताए । यदी भारत काश्मीरका विषयमा वार्ता गर्दैन भने पाकिस्ताने के गर्छ ?
जवाफमा इमरान खानले भने, ‘दोस्रो विश्व युद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ बन्यो र हामीले यही कश्मीरको मुद्दा उठायौं र अपेक्षा गरौं कुनै न कुनै समाधानको उपाय निस्कने छ । हामी विश्वका सबै शक्तिशाली मुलुकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौं । यदि कश्मीरको मुद्दा सुल्झिएन भने यसको असर सम्पूर्ण विश्वमा पर्नेछ । जुन देशले भारतलाई ठूलो बजार देखिरहेको छ र उसले व्यापारका हिसावले सोचिरहेको छ, उनीहरुलाई यो कुरा थाहा छैन कि यदि उनहरुले हस्तक्षेप गरेनन् भने त्यसको असर भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्रै नभई यसले संसारभरी प्रभावित पार्नेछ । ’